Ihe omimi: Ihe mere oju ojuju di mkpa maka ulo ohia gi na SEO
N'ezie, engines ọchụchọ nwere mmetụta dị ukwuu banyere otú nrụọrụ weebụ kwesịrị ịbụewu. Imirikiti search engines na-etinye uche na àgwà nke ọdịnayana mmelite oge. Ya mere, iji nọgide bụrụ ihe dị mkpa, ịkwesịrị imelite ọdịnaya gịugboro ugboro. Julia Vashneva, Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ahịa nke Ụlọ elu Ọrụ Ntanetị,akọwa ihe mere ọdịnaya ọhụrụ bụ isi ihe na - akpata ọganihu nke weebụsaịtị gị.
1. Egwuregwu Ndị Na-achọ Ngwá Ọrụ Na-agakarị
Ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ gị na-emelite ọhụrụ na isiokwu ọhụrụ na webpages, mgbe ahụ search enginendị na-awagharị crawlers ga-aga na saịtị ahụ ugboro ugboro. Ọ pụtara na nhazi nke saịtị gị ga-agaỌsọ ọsọ. Mgbe engines ọchụchọ na-aga na saịtị gị mgbe niile, ịnwere ike iru ọkwa dị elu karịma ọ bụrụ na ọdịnaya gị bara uru. Mgbe ọ bụla i tinyere ọdịnaya ọhụrụ na ebe nrụọrụ weebụ gị, engines ọchụchọhụ nke ahụ ma megharia ogo nke saịtị gị. Ya mere, melite ebe nrụọrụ weebụ gịmgbe nile iji mee ka o nwekwuo ohere inweta ogo di elu.
2. Gbanwee ikike Ịntanetị nwere ike
Ụzọ dị mkpa maka ịbawanye ikike nke ebe nrụọrụ weebụ gị bụ ịmepụta ọdịnaya.Kwusaa ihe bara uru, ọdịnaya nke oge, ma ị ga-enye gị saịtị aikike ka ukwuu..Ọ bụrụ na ị na-eme nyochaa ikike saịtị na niche gị, ịga-amata na ha nwere ọtụtụ puku peeji nke Google na-edepụta. Ọ bụrụ na ị bụkpebisiri ike ịbanye n'òtù ha, mgbe ahụ, ị ​​ga-ebipụta ọdịnaya dị mkpa karị. Ọ bụrụ na ịkwadoro na ị na-edekwu ọdịnaya na otu isiokwu, ị ga-enweta ntụkwasị obi nandị mmadụ na search engines. Ikike akara nke saịtị gị ga-abawanye dị ka ị nwetaratụkwasịrị obi na karia. Mee ka aha gị mara site na ị na-arụ ọrụ na ntanetị mgbasaozi na ebe nrụọrụ weebụ.
3. Inwekwu Ọganihu Na-achọ Mmasị Ndị Ọzọ
Mgbe ị mepụtara ọdịnaya ọhụrụ mgbe niile, saịtị gị ga-enwe ọtụtụ okwu. Site na ịmepụta isiokwuederede, ị ga-enwe ohere ịchọta ndị ọbịa. Nchọgharị ọchụchọga-amata saịtị gị ma zigara gị ndị ọbịa. Ọ bụ ezie na Google adịghị adabereotutu ibu na ọnụ ọgụgụ nke isiokwu gị na ebe nrụọrụ weebụ gị, ọ ka dị mkpa ka ọ bụrụ ọnọdụederede na gburugburu isiokwu gị. A na-eji okwu engines na-eme ihe iji mee ka ndetu gịsaịtị dabere na isiokwu okwu. Cheta na ị gaghị etinye isiokwu gị dị ka nke aga-adọta nhichapu ugwo uzo uchu.
4. Mee Ka Ndị Na - agụ Akwụkwọ Gị Mara
Nwelite mmelite ga-edebe ndị debanyere aha na ndị ọbịa gị na ihe ndị mere na mgbanwena ụlọ ọrụ gị. Ihe ọhụrụ nwere ikike iji tọghata ndị ọbịa ọhụrụ ka ha bụrụ ndị ahịa.Site na ị na-edepụta ozi ọhụrụ ugboro ugboro, ị ga-edebe ndị na-ege gị ntị. Nke a gaenweta gị ogologo oge iguzosi ike n'ihe n'aka ndị ahịa, ya mere na saịtị gị ga-eto na ewu ewu naogo. Nye ndị ọbịa gị ihe ọmụma doro anya banyere ngwaahịa na ọrụ gị.Gwa ndị ọbịa gị uru maka ngwaahịa gị na ihe mere ha ji chọọ ha. Mgbe ịnye ozi zuru ezu nye ndị ahịa nwere ike, ị nyere ha aka ime nhọrọ ziri ezi,ma yikarịrị ka ha ga-azụ ngwaahịa gị Source .